သွေးပေါင်ကျခြင်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်သည် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မတူကွဲပြားကြသော်လည်း အပေါ်သွေး 90 ထက်နည်းပါက (သို့) အောက်သွေး 60 ထက်နည်းပါက သွေးပေါင်ကျခြင်းဟု အကြမ်းဖျင်းမှတ်ယူနိုင်ပါသည်။ သွေးပေါင်ကျခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများမှာ ရေဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းမှအစပြု၍ အခြားအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများထိဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သွေးပေါင်ကျခြင်းသည် ကုသ၍ရနိုင်သော်လည်း ဖြစ်စေရသောအကြောင်းအရင်းကိုရှာဖွေရန်မှာ အလွန်အရေးကြီးလှပါသည်။
သွေးပေါင်ချိန်ရုတ်တရက်ကျခြင်း (သို့) အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများတွေ့ရှိရပါက သွေးပေါင်ကျခြင်း မှာ နောက်ကွယ်မှ ကျန်းမာရေးပြဿနာကြောင့်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။
- လက်ဖျားခြေဖျားများအေးစက်၍ ဖြူဖျော့လာခြင်း
သွေးပေါင်ချိန်ဆိုသည်မှာ သွေးလွှတ်ကြောအတွင်းရှိသည့် ဖိအားကိုနှလုံးခုန်ချိန်နှင့် နှလုံးနားချိန်2ချိန်လုံးတွင် တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။
အပေါ်သွေး - နှလုံးမှတဆင့် သွေးများကိုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ညှစ်ထုတ်ချိန်တွင် နှလုံးရှိဖိအားကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။
အောက်သွေး - နှလုံးခုန်ချိန်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ခြားနားချိန်တွင်ရှိသော သွေးလွှတ်ကြောအတွင်းရှိ ဖိအားကိုဆိုလိုပါသည်။
လတ်တလော သတ်မှတ်ချက်များအရ ပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်ကို 120/80 မီလီမီတာမာကျူရီ (120/80 mmHg) နှင့် အောက်ဟုယူဆကြသည်။
သွေးပေါင်ချိန်ကို အချိန်မရွေးတိုင်းတာနိုင်သော်လည်း တစ်ချိန်နှင့်တစ်ချိန် တိုင်းတာခြင်းမှာ အမြဲမတူညီနိုင်ပေ။ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထား၊ အသက်ရူနှုန်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုရှိခြင်းနှင့်မရှိခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ၊ ဆေးဝါးများ၊ အစားအသောက်နှင့် တိုင်းတာသောအချိန်တို့ပေါ်တွင် မူတည်၍ကွဲပြားကြခြင်းဖြစ်သည်။
သွေးပေါင်ချိန်သည် ညအချိန်တွင် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်၍ အိပ်ရာထအချိန်တွင် အမြင့်ဆုံးသို့တက်နေလေ့ရှိသည်။
တခါတရံ မိမိအတွက်သွေးပေါင်ကျနေသည်ဟုပြောနိုင်သော သွေးပေါင်ချိန်သည် အခြားသူတစ်ယောက်အတွက် ပုံမှန်ဖြစ်နေနိုင်သည်။ ဆရာ၀န်အများစုသည် ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေမှသာ သွေးပေါင်ကျခြင်းဟု သတ်မှတ်လေ့ရှိကြသည်။
ရုတ်တရက် သွေးပေါင်ကျခြင်းသည် အလွန်ပင်အန္တရာယ်များလှပေသည်။ သွေးဖိအား 20 ခန့်သာပြောင်းလဲခြင်း (ဥပမာ - အပေါ်သွေး 110 မှ 90 ဖြစ်သွားခြင်း) ပင်လျှင် ဦးနှောက်မှ သွေးအလုံအလောက်မရရှိတော့သောကြောင့် ခေါင်းမူးခြင်းနှင့် မူးမေ့ခြင်းများကို ခံစားရစေနိုင်ပါသည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေများ (သွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ ပြင်းထန်သော ကူးစက်ရောဂါများ၊ ဓာတ်မတည့်မှုများ) ကြောင့်ဖြစ်သော သွေးပေါင်ကျခြင်းကမူ အသက်အန္တရာယ်ကိုပါ ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါသည်။
အားကစားသမားများနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ပြုလုပ်သူများတွင် နှလုံးခုန်နှုန်းမှာ အခြားသူများထက် ပိုမိုနှေးကွေးခြင်းကြောင့် သွေးပေါင်ကျလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးလိပ်မသောက်သုံးရန်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မျှတသော အစားအစာများကို ရွေးချယ်စားသောက်ရန်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းရန်မှာအရေးကြီးလှပါသည်။
1. ကိုယ်၀န်ဆောင်ခြင်း - ကိုယ်၀န်ရှိချိန်တွင် သွေးလည်ပတ်စနစ်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သွားခြင်းကြောင့် သွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်းကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာဖြစ်၍ ကလေးမွေးပြီးနောက်တွင် မိမိ၏ပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်အတွင်းသို့ ပြန်ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။
2. နှလုံးနှင့်ဆိုင်သောရောဂါများ - နှလုံးခုန်အလွန်နှေးကွေးခြင်း၊ နှလုံးအဆို့ရှင်ပြဿနာများနှင့် နှလုံးအလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် သွေးပေါင်ချိန် ကျစေနိုင်ပါသည်။
3. ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုမမှန်ခြင်းပြဿနာများ - လည်ပင်းကြီးရောဂါ၊ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကျဆင်းခြင်း၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ စသည်တို့ကြောင့် သွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
4. ရေဓာတ်ခန်းခြင်း - မိမိခန္ဓာကိုယ်မှ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုများနေပါက ရေဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းကို စတင်ခံစားရနိုင်ပါသည်။ အနည်းငယ်ရေဓာတ်ခန်းခြင်းကြောင့် အားနည်းခြင်း၊ မူးေ၀ခြင်းနှင့် မေ့လဲခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ဖျားခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ၀မ်းလျှောခြင်း၊ ဆီးဆေးများအလွန်အမင်းသောက်သုံးခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းထန်စွာပြုလုပ်ခြင်းတို့ကြောင့်လည်း ရေဓာတ် ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။
5. ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းကြောင့် သတိလစ်ခြင်း - သွေးပေါင်ချိန်ရုတ်တရက်ကျခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်သျှူးများထဲ အောက်ဆီဂျင်ရောက်မှုနည်းပါးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ကုသမှုမခံယူပါက မိနစ်ပိုင်းအတွင်း (သို့) နာရီပိုင်းအတွင်း သေဆုံးသည်အထိဖြစ်နိုင်ပါသည်။
6. သွေးဆုံးရှုံးမှုများခြင်း - အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း (သို့) ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေးယိုစိမ့်မှုများခြင်းကြောင့် သွေးဆုံးရှုံးမှုများပြီး ရုတ်တရက် သွေးပေါင်ကျနိုင်ပါသည်။
7. သွေးဆိပ်တက်ခြင်း - ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ရောဂါပိုးများ၀င်ရောက်ခြင်းကြောင့် သွေးဆိပ်တက်ခြင်းဖြစ်ပွားကာ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသည်အထိ သွေးပေါင်ချိန်ကျနိုင်ပါသည်။
8. အလွန်ပြင်းထန်သော ဓာတ်မတည့်မှုများ - ဓာတ်မတည့်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သောအရာများမှာ အစားအစာများ၊ အချို့သောဆေးဝါးများ၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားများ၏ အဆိပ်နှင့်တစေးတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် အသက်ရှုရခက်ခြင်း၊ အစက်အပြောက်များထွက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အာသီးရောင်ခြင်းနှင့် သွေးပေါင်ကျခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
9. အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း - ဗီတာမင် B12 နှင့် ဖောလိတ်ဓာတ်များ ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် သွေးနီဥထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးကာ သွေးပေါင်ချိန်ကျစေနိုင်ပါသည်။
ဆီးဆေးများ (ဥပမာ - Lasix)
သွေးတိုးကျဆေးများ (Alpha blockers)
နှလုံးဆေးများ (Beta blockers)
ပါကင်ဆန်ရောဂါ (အာရုံခံကြောများပျက်စီးခြင်းကြောင့် လှုပ်ရှားမှုနှေးကွေးခြင်း)တွင် အသုံးပြုသောဆေးများ
ဖြစ်ပွားရခြင်းနှင့် အခြားအချက်များပေါ်တွင်အခြေခံ၍ သွေးပေါင်ကျခြင်းကို အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်။
မတ်တပ်ရပ်သည့်အခါတွင် သွေးပေါင်ကျခြင်း - လဲလျောင်းရာ (သို့) ထိုင်နေရာမှ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါက ရုတ်တရက်သွေးပေါင်ကျခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
အစာစားပြီးနောက် သွေးပေါင်ကျခြင်း - အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများတွင် အတွေ့ရများသည်။
ဦးနှောက်အချက်ပေးစနစ်များ အလုပ်မလုပ်သောကြောင့် သွေးပေါင်ကျခြင်း - အချိန်ကြာမြင့်စွာမတ်တပ်ရပ်ပြီးနောက် ခံစားရသော သွေးပေါင်ကျခြင်းမျိုးကိုဆိုလိုသည်။
အာရုံကြောများပျက်စီးခြင်းကြောင့် သွေးပေါင်ကျခြင်း - Sky Drager ဟုခေါ်သော အလိုအလျောက် အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းများ တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးလာသော ရှားပါးရောဂါမျိုးတွင်တွေ့ရပါသည်။
သွေးပေါင်ကျခြင်းမှာ လူတိုင်းတွင်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း မိမိ၏အသက်အရွယ်နှင့် အခြားအချက်များပေါ်တွင်လည်း များစွာတည်မှီနေပါသည်။
1. အသက်အရွယ် - မတ်တပ်ရပ်စဉ် (သို့) အစာစားပြီနောက် သွေးပေါင်ကျခြင်းတို့သည် အသက် 65 နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ဦးနှောက်အချက်ပေးစနစ်များ အလုပ်မလုပ်သောကြောင့် သွေးပေါင်ကျခြင်းကမူ ငယ်ရွယ်သူများနှင့် ကလေးငယ်များတွင် အတွေ့ရများတတ်သည်။
2. ဆေးဝါးများ - သွေးတိုးကျဆေးကဲ့သို့ ဆေးဝါးများသောက်သုံးနေသူသည် သွေးပေါင်ကျနိုင်ချေများသည်။
3. အချို့ရောဂါများ - ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ အချို့နှလုံးရောဂါများတွင် သွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်းကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
သွေးပေါင်အနည်းငယ်ကျခြင်းကြောင့် ခေါင်းမူးခြင်း၊ အားနည်းခြင်းတို့ကိုခံစားရရုံမျှမက လဲကျခြင်းကြောင့် ဒဏ်ရာအနာတရလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် သွေးပေါင်အလွန်အမင်းကျဆင်းပါက အောက်ဆီဂျင်အလုံအလောက်မရသောကြောင့် နှလုံးနှင့်ဦးနှောက် ပျက်စီးခြင်းများထိပါ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။
သွေးပေါင်ကျခြင်း၏ နောက်ခံအကြောင်းအရင်းကိုသိပါမှ သင့်လျော်သော ကုသမှုကိုပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါ၍ အောက်ပါစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ရန် ဆရာ၀န်မှညွှန်ကြားပေလိမ့်မည်။
2. သွေးစစ်ခြင်း - မိမိ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ခြုံငုံ၍သိစေနိုင်ရုံမျှမက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နည်း/များခြင်း (သို့) သွေးနီဥနည်းခြင်းတို့ကိုပါသိနိုင်ပါသည်။
3. လျှပ်စစ်သုံး နှလုံးတိုင်းစက်ဖြင့်တိုင်းတာခြင်း (ECG)
5. ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုခြင်းကြောင့် နှလုံးပေါ်တွင်သက်ရောက်ပြောင်းလဲမှုပမာဏ အကျိုးဆက်ကိုတိုင်းတာခြင်း (Stress test)
6. Valsalva maneuver - အလိုအလျောက်အာရုံကြောစနစ်ကို စမ်းသပ်သော စစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြုလုပ်ပုံမှာ ရှေးဦးစွာ အသက်ပြင်းပြင်းရှုသွင်း၍ ဘောလုံးမှုတ်သကဲ့သို့ ပါးစပ်မှအားကုန်မှုတ်ထုတ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
7. Tilt table test - မတ်တပ်ကြာကြာရပ်ခြင်းကြောင့် သွေးပေါင်ကျတတ်သူများတွင်ပြုလုပ်သော စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
မတ်တပ်ရပ်စဉ် တခါတရံမူးေ၀ရုံမှအပ အခြားထူးထူးခြားခြားရောဂါလက္ခဏာများမရှိပါက ကုသမှုခံယူရန်မလိုအပ်ပေ။ အကယ်၍ရောဂါလက္ခဏာများခံစားနေရပါက သွေးပေါင်ကျခြင်းကိုကုသရုံမျှမက သွေးပေါင်ကျခြင်းကိုဖြစ်စေသော အခြေခံအကြောင်းအရင်းများကိုလည်း ရှာဖွေသင့်ပါသည်။
ဆေးဝါးအချို့ကြောင့် သွေးပေါင်ကျခြင်းဆိုပါက ဆေး၏ပမာဏကို လျှော့ချလိုက်ခြင်း (သို့) လုံး၀ရပ်တန့်လိုက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ အကြောင်းအရင်းကိုမသိရပါက အရေးကြီးဆုံးမှာ သွေးပေါင်ချိန်ပုံမှန် အနေအထားသို့ပြန်ရောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် သွေးပေါင်ကျခြင်းအမျိုးအစားတို့ပေါ်တွင်မူတည်၍ ပြုလုပ်နိုင်သော နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။
1. အရင်ကထက် ဆားပိုစားပါ - သို့သော် သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် ဆိုဒီယမ် (ဆားဓာတ်) များပြားပါက နှလုံးရပ်တန့်မှုဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် ဆရာ၀န်နှင့်ဦးစွာတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
2. ရေများများသောက်ပါ - အရည်သည်ခန္ဓာကိုယ်ရှိ သွေးထုထည်ကိုတိုးနိုင်စေရုံမျှမက ရေဓာတ်ခန်းခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
3. အထူးစပယ်ရှယ်ပြုလုပ်ထားသော ခြေအိတ် (အစွတ်သုံးခြင်း) - သွေးပြန်ကြောထုံးခြင်းကြောင့် ခြေသလုံးတွင်နာကျင်စေခြင်းနှင့် သွေးကြောဖောင်းခြင်းများကို သက်သာစေနိုင်သောခြေအိတ်များကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လည်း ခြေထောက်တွင်သွေးများစုပုံခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
4. ဆေးဝါးများ - ထိုင်နေရာမှ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ရုတ်တရက်သွေးပေါင်ကျခြင်းကို ကုသသောဆေးဝါးများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာ - fludrocortisone ခန္ဓာကိုယ်၏သွေးပမာဏကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် သွေးပေါင်ချိန်ကို ပြန်လည်မြင့်တက်စေပါသည်။
1. ရေများများသောက်ပါ၊ အရက်သောက်ခြင်းကို လျှော့ချပါ။
2. ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်မျှတသော အစာများကိုရွေးချယ်စားသုံးပါ။ (ဥပမာ - အစေ့အနှံများ၊ သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ကြက်ရင်အုံများ၊ ငါးများ) အကယ်၍ ဆရာ၀န်က ဆားကိုပိုမိုစားသုံးရန်ညွှန်ကြားထားသော်လည်း သင်မနှစ်သက်ပါက သဘာ၀ပဲငံပြာရည်ကို အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
3. ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကို ရုတ်တရက်မပြောင်းလဲပါနှင့်။ သွေးပေါင်ကျခြင်းကြောင့် မူးေ၀ခြင်းမှကာကွယ်ရန် လဲလျောင်းရာမှ ဖြေးညင်းစွာထပါ။
အိပ်ရာမှမထမီ ဦးစွာအသက်ပြင်းပြင်းရှုပါ။ ပြီးမှထထိုင်ပါ။ အနည်းငယ်မြင့်သောခေါင်းအုံးဖြင့် အိပ်စက်ခြင်းဖြင့် ကမ်ဘာ့ဆွဲငင်အားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ကာကွယ်ရာလည်းရောက်ပါသည်။
အကယ်၍ မတ်တပ်ရပ်ပြီးပါက ရောဂါလက္ခဏာများစတင်ခံစားလာရပါက သင်၏ပေါင်နှစ်ခုကိုယှက်၍ အားကုန်ညှစ်ပါ (သို့) ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ကုလားထိုင်ပေါ်တင်၍ အရှေ့ကိုကုန်းနိုင်သမျှကုန်းပါ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ခြေထောက်မှသွေးများနှလုံးသို့ရောက်ရှိစေရန် အထောက်အကူပေးပါသည်။
4. အစာကိုနည်းနည်းစီ မကြာခဏစားပေးပါ။ အစာစားပြီးနောက် သွေးပေါင်ရုတ်တရက်ကျခြင်းကိုကာကွယ်ရန် တစ်ခါစားလျှင် အနည်းငယ်သာစား၍ အာလူး၊ ထမင်း၊ ပေါင်မုန့်ကဲ့သို့ ကစီဓာတ်များသောအစားအစာများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ယာယီဖြေရှင်းနည်းအနေဖြင့် သွေးပေါင်ချိန်တက်စေရန် အစာနှင့်အတူကော်ဖီ (သို့) လက်ဖက်ရည်ကို သောက်သုံးနိုင်သော်လည်း ကဖိန်းဓာတ်သည် အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းကြောင့် ဆရာ၀န်ထံမှ ဦးစွာအကြံဉာဏ်ရယူသင့်ပါသည်။